Baarlamaanka Soomaaliya oo sharcidarro ku tilmaamay dhiibistii Qalbi Dhagax. |
Baarlamaanka Soomaaliya oo sharcidarro ku tilmaamay dhiibistii Qalbi Dhagax.
Baarlamanka Federaalka Soomaaliya ayaa sharcidarro ku tilmaamay go’aankii xukuumadda Soomaaliya ay Itoobiya ugu gacan gelisay Cabdikariim Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax) bishii Agosto ee sanadkan.
Baarlamaanka oo maanta shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale caddeeyay in jabhadda ONLF aysan ahayn mid argagixiso.
Horraantii bishii Sagaalaad ee aynu ka soo gudubnay ayay ahayd markii baarlamaanka Soomaaliya uu guddi u saaray tallaabadii dowladda Soomaaliya ay Itoobiya ugu gacan gelisay sarkaalkan jabhadda hubeysan ee ONLF.
Baarlamaanka Soomaaliya oo guddi u saaray arrinta Qalbi Dhagax
Dawladda Soomaaliya ayaa horaan u sheegtay in dhiibitaanka Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax uu ahaa mid loo maray sharciga, waxa ayna Qalbi Dhagax ku eedeeyeen in uu xiriir la lahaa ururka Al Shabaab oo uu amniga dalka lid ku ahaa.
Haseyeeshee Jabhadda ONLF iyo Al-Shabaab ayaa labaduba waxa ay beeniyeen eedeen in Qalbi Dhagax uu Shabaab ka tirsanaa.
Lahaanshaha sawirkaABDI MOHAMOUD OMAR / FACEBOOK
Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa Qalbi Dhagax ku tilmaantay qof dambiile ah oo dambiyo kala duwan ka galay gudaha Itoobiya.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo la hadlay warbaahinta dowlad deegaankaasi ayaa sheegay in ninkaasi uu ahaa nin u dhashay dowladda deegaanka Itoobiya, kana mid ahaa booliiskii ugu horeeyay ee deegaanka, kadibna sida uu sheegay duurka la galay dhibaato uu sameeyay oo ay ka mid ahaayeen dil, dhac iyo kufsi.